Qaybtii dhuntay ma aha mid si adag loo wado lama garanayo, talaabooyinka soo kabashada - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Qaybtii dhuntay ma aha mid si adag loo wado lama garanayo, talaabooyinka soo kabashada
Qaybtii dhuntay ma aha mid si adag loo wado lama garanayo, talaabooyinka soo kabashada
Baahida loo qabo Bplandatarecovery si loo soo ceshado xogta waa: Bplandatarecovery wuxuu aqoonsan karaa qalabka keydka (diskka adag, diskiga adag ee laga saari karo, U disk, kaarka xusuusta, iwm.) ee aad rabto inaad ka soo kabato xogta. Tusaale ahaan, sawirka soo socda:
Bplandatarecovery wuxuu aqoonsan yahay disk-ga adag
Kani waa kumbuyuutarka aan isticmaalo, maamulo Bplandatarecovery oo aan garto Labada kaydinta wax lagu kaydiyo, HD0 waa diskka adag ee mashiinkan, awooda ayaa ah 2T, waxaa jira 6 qaybood sida C, D, E (hal qeyb looma qoro warqad wadis ah); RD1 waa U disk, awooddu waa 15G oo keliya, hal kaliya dusha kore Qaybti H. Haddii aaladda bakhaarradu ay aqoonsan kari weydo Bplandatarecovery ka dib markay ku xidhan tahay kombiyuutarka, laguma soo bandhigi doono daaqadda dhinaca bidix ee istiraatijiyada ugu weyn ee Bplandatarecovery. Softiweerku dib uma soo ceshan karo xogta.Waxaa loo baahan yahay in loo diro shirkad khibrad u leh soo kabashada xogta si loo hagaajiyo qalabka korantada ama furitaanka soo kabashada. Kooxda Bplandatarecovery lafteeda ayaa sidoo kale bixiya adeeggan, isla markaana ah kobcinta Bplandatarecovery, si dabiici ah ayay u awood badantahay teknolojiyadda. Isticmaalayaasha ubaahan waxay booqan karaan Bplandatarecovery service data data ka soo kabashada si ay waxbadan uga bartaan. Xusuusin:
Xusuus-qorka ma aha disk-ga adag ee looma aqoonsana, badanaa saameyn kuma yeesho soo kabashada xogta. Mararka qaarkood, qaybtanaha adeegsadaha laguma arki karo Bplandatarecovery sababao kala duwan awgood Tani waa hagaag, maahan dhibaato xaga qalabka ah, sida caadiga ah dhibaatada kombiyuutarka nidaamka faylka ah.Waxaad wali u istcimaali kartaa Bplandatarecovery inaad ka soo kabato xogta lumay. Midda labaad, sida loo bilaabayo soo kabashada xogta
Way ka duwan tahay qaar ka mid ah barnaamijyada dib u soo kabashada ee nacasnimada ah (sida soo kabashada xogta) ee adeegsadayaasha Xiaobai, haddii aad tahay Marka ugu horeysa ee aad isticmaasho Bplandatarecovery, waxaa laga yaabaa inaadan isla markiiba helin albaab aad ku gasho howlaha soo kabashada, laakiin runtii waa mid aad u fudud. Haddii aad go'aansan karto qeybta ka mid ah xogta aad rabto inaad soo ceshato ayaa jira, ka dibna toos toos u dooro qeybinta khariidadda disk qadka adag ee ka sareysa isuduwaha ugu weyn ee Bplandatarecovery, ka dibna riix batoonka midig ee midig, ka dibna habka furaha pop-up-ka. Tusmada, xulo sheyga menu "ka soo kabsaday ka dib markii la tirtiray ama la habeeyay faylka", sida ku cad shaxdan soo socota:
Bplandatarecovery ayaa dib loo soo ceshtay ka dib markii la tirtiray ama faylka loo habeeyay
Ka soo kabashada xogta qeybtii D
Mararka qaarkood, waxaad cartaat go'aan ka gaartaa qeybtaan xogta lagu soo aruurin lahaa. Inta badan, qeybtii asalka ahayd waay lumay ama qeyb cusub ayaa la abuuray Daboolid, kiisaskaas, waxaad ubaahantahay inaad doorato aaladda keydinta si aad uga soo kabato xogta ku jirta qeybta ugu weyn ee dhinaca bidix ee Bplandatarecovery, ka dibna midigta riix.Xitaa sidoo kale menu menu gaagaaban oo soo duulaya, xulo sheyga menu "xirmay ama qaab file soo kabashada ah. ", Sida hoos ku cad:
Bplandatarecovery waa la tirtiray ama la habeeyay faylal soo kabasho
PreWaa maxay sababta sababta diskiga adag loo furayo? Sidee looga soo kabanayaa?
NextIkhtiyaarada soo kabashada xogta